अवसर र चुनौतीबीच देउवाको सत्तारोहण Global TV Nepal
ग्लोवल टि.भी. मङ्लबार, असार २९, २०७८ 0
संवैधानिक फैसलाबाट कम्युनिस्ट सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर पाएका छन् । असार २८ को सर्वाेच्चको परमादेशले देउवालाई ५ औ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिलेको हो । संकटपूर्ण मुलुकलाई सम्हाल्ने गम्भीर चुनौती र अवसरको बीचमा देउवाको सिंहदरबार इनिङ भएको छ।
मुलुकको ४६ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिंहदरबार इनिङ भएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि संकटपूर्ण मुलुकलाई सम्हाल्ने गरी देउवालाई पाँचौ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने चुनौती र अवसर मिलेको छ।
नव नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक यात्रा
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वि.सं. २००३ जेठ ३१ मा डडेल्धुराकोे गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा जन्मिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले साविक असीग्राम गाविस–५ मा रहेको असिग्राम प्राथमिक विद्यालय र एलएसली सीताराम मावि डोटीबाट पूरा गरेका हुन्। देउवा २०२० सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । नेपालमा एसएलसी परीक्षा उत्तिर्णपछि देउवा २०२१ मा काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका थिए। देउवा कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा गरेका थिए । विसं २०२८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।
देउवाले राजनीतिक बन्दीका रुपमा पटक–पटक गरी करिब ९ वर्ष जेलजीवन बिताएका छन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाएका देउवालाई वीपीले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएर खटाएका थिए। सुदूरपश्चिममा राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रभाव बलियो भएका देउवा राष्ट्रिय राजनीतिका एक मुख्य पात्र हुन् । जब नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा देशमा पहिलो जनआन्दोलन भयो, त्यतिबेला देउवा भने लन्डनको स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि देउवा लण्डनबाट काठमाडौं फर्किए २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बने। गृहमन्त्री बनेको पाँच वर्षभित्रै उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। राजनीतिको धेरै उतारचढाव खेपेका देउवाले कांग्रेसभित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा उनले कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ पाएका थिए।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकारी प्रमुखको अनुभव
देउवा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पालामा पहिलोपटक २०५२ साल भदौ २७ देखि २०५३ साल २९ फागुनसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । देउवाको दोस्रो सत्तारोहण २०५८ साउन ११ मा भएको थियो । त्यस कार्यकाल २०५९ असोज १८ सम्म कायम भएको थियो । उनी तेस्रो पटक २०६१ जेठ २१ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यो कार्यकाल २०६१ माघ १९ सम्म चलेको थियो । २०५८ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई ०५९ असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका थिए । तत्कालीन राजाको कदम विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ०६१ मा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसद् पुनर्बहाली बाचा गरेपछि देउवा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्रीको दोष लगाउदै अपदस्त गरेका थिए । देउवालाई अपदस्त गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रिय शासन सुरु गरेका थिए । तर,२०६२÷६३ को दोश्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो ।२०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट असक्षमको आरोप लागेका देउवा २०७४ साल २३ जेठमा पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनै देउवाकै नेतृत्वमा मुलुकमा पहिलोपटक संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
देउवालाई ५ औ पटक सिंहदरबार प्रवेशको अवसर
करिब ४ वर्ष सत्ता बाहिर रहेका देउवा पुन २०७८ असार २९ मा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । असार २८ को सर्वाेच्चको परमादेशपछि देउवा पुनः मुलुकको कार्यकारी बन्ने अवसर पाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदको सशरिरसहित हस्ताक्षरको बलमा देउवालाई प्रधानामन्त्री बन्ने वातावरण बनेको हो । मुलतः कम्युनिष्टभित्रको गाइजात्राले देउवालाई ४६ औ प्रधानमन्त्री बनेर मुलुक सम्हाल्ने अवसर मिलेको हो ।
देउवाका लागि आगामी चुनौती
२०७४ संघीय निर्वाचनले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको छ। तर, जनादेश अनुसार मुलुक चल्न सकेन, विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीचको गाइजात्रे झगडाले अन्ततः मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आयो । कांग्रेसको नेतृत्वको हैसियतले मुलुक संचालन गर्ने कार्यकारी दायित्व देउवाको हातमा पुगेको छ। यो उनको लागि अवसर भन्दा चुनौतीका पहाड निकै दर्विला छन् । शासकीय स्वेच्छाचारीले गिजुलिएको मुलुकलाई विधि र पद्धतिमा हिडाउन मात्रै होइन, महामारीले सिर्जित समस्यासंगै जुध्दै आम नागरिकको दैनिकीमा सुधार ल्याउनु उनका अघि चुनौती छन् । यो संगै गठबन्धनलाई विश्वासमा राख्न पनि उनलाई चुनौती छ । देउवाको अघि सबै दललाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु, देशमा सुशासन कायम गर्नु, कोभिडको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनु, प्रतिनिधिसभाको १७ महिने कार्यकाल जोगाउनु अनि आगामी चुनावमा नयाँ जनादेशप्राप्त दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मुख्य कार्यभार हुनेछ ।
अविश्वास प्रस्तावमा निर्णायक जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित
एमाले विवाद मध्यरातमा मिल्यो, कार्यदलले गर्‍यो १० बुँदे सहमति
बी एण्ड सी सम्बन्धन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हट्यो